Shooting Battle 1.2.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.2.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား Shooting Battle
Shooting Battle ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Real-time ယခုအားကစားရိုက်ကူးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကစားသမားများဆန့်ကျင် 1-အပေါ်-1 ယှဉ်ပြိုင်! သင့်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ရန်နှင့်အစဉ်အဆက်အများဆုံးယှဉ်ပြိုင် FPS ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းထဲမှာကစား။ ပစ်ခတ်မှုအတွက်တိကျမှန်ကန်မှု, တိများနှင့်မြန်နှုန်းကိုအကောင်းဆုံးသေနတ်သမားရှိကြလော့။
- 1-1-ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မျိုးစုံကစားသမားပြိုင်ပွဲအတွက်အမြန်-မီး Play
- သွားလာရင်း Console အရညျအသှေးပစ်ခတ်မှုဂိမ်း
- က Ultra လက်တွေ့ 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အေးမြ animations တွေကို
- သေနတ်နဲ့, ရိုင်ဖယ်သေနတ်များအပါအဝင်လက်တွေ့လက်နက်တစ်ခုအာဆင်နယ်အသင်းဟာ
Shooting Battle အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Shooting Battle အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Shooting Battle အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Shooting Battle အား အခ်က္ျပပါ
josephts စတိုး 16 11.5k
Shooting Battle ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Shooting Battle အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Doodle Mobile Ltd.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.doodlemobile.com/policy.htm
App Name: Shooting Battle
Release date: 2019-09-16 09:05:33
Shooting Battle APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ